Awoodda wax-soo-saarka galoofyada la tuuri karo ayaa loo wareejiyay Shiinaha - Wararka - Baili Medical Supplies (Xiamen) Co., Ltd.
Awoodda wax-soo-saarka galoofyada ee la tuuri karo ayaa loo wareejiyay Shiinaha
Maaddaama uu cudurku keenay wacyiga dadka ee ilaalinta badbaadada iyo isbeddelka caadooyinka nolosha, qaar ka mid ah warshadaha aan la aqoon ayaa si tartiib tartiib ah u galaya indhaha dadweynaha, gaar ahaan maalgashadayaasha. Warshadaha galoofyada ilaalinta ee la tuuri karo ayaa ka mid ah, mar suuqa caasimada. Kulaylku wuu sarreeyaa.
Marka la eego macnaha guud ee caalamiyeynta iyo caadiyeynta ka hortagga iyo xakameynta faafitaanka, sare u kaca baahida waqtiga xasaasiga ah iyo baahida mustaqbalka ee caadiga ah ee ay soo dedejiso waxay keenaysaa isbedelo qoto dheer warshadaha galoofyada la tuuri karo ee caalamiga ah. Waa maxay isbeddellada ay ku socoto warshadaha galoofyada la tuuri karo? Intee in le'eg ayay noqon doontaa isticmaalka caalamiga ah mustaqbalka? Aaway jihada maalgashiga mustaqbalka ee warshadaha galoofyada la tuuri karo ee qaybta caafimaadka?
Baahida gacmo gashi
In badan oo ka hor inta aan dillaacin
2020, warshadaha galoofyada la tuuri karo ee gudaha ayaa sameeyay khuraafaad ah wax qabad kor u kaca intii lagu jiray cudurka faafa, iyo alaab-qeybiyeyaal badan oo guri la tuuri karo ayaa sameeyay lacag badan. Barwaaqada heerkan sare ah ayaa socotay ilaa sanadkan. Xogtu waxay muujineysaa in rubuci hore ee 2021, oo ka mid ah 380-ka shirkadood ee A-share ee dawooyinka iyo aaladaha caafimaadka, wadar ahaan 11 faa'iido ayaa kor u dhaaftay 1 bilyan yuan. Waxaa ka mid ah, Intech Medical, hogaamiyaha warshadaha galoofyada la tuuri karo, ayaa xitaa aad u wanaagsan, isagoo helay faa'iido saafi ah oo ah 3.736 bilyan yuan, koror sanad-sannadka ah 2791.66%.
Ka dib markii uu dillaacay cudurka faafa ee sambabada cusub, baahida caalamiga ah ee galoofyada la tuuri karo ayaa kor u kacay. Marka loo eego xogta laga soo xigtay Maamulka Guud ee Kastamka Shiinaha, mugga dhoofinta galoofyada la tuuri karo ee 2020 wuxuu ka kordhin doonaa 10.1 bilyan bishii labadii bilood ee ugu horreeyay ka hor cudurka illaa 46.2 bilyan bishii (Noofambar isla sanadkaas), koror. qiyaastii 3.6 jeer.
Sannadkan, iyada oo cudurka faafa ee adduunku uu sii socdo oo ay muuqdaan noocyo is-bedelmay, tirada caabuqyadu waxay kor u kacday 100 milyan bilawga sanadka ilaa 200 milyan muddo 6 bilood gudahood ah. Marka loo eego tirakoobyada Ururka Caafimaadka Adduunka, laga soo bilaabo Ogosto 6, 2021, tirada guud ee kiisaska la xaqiijiyay ee cudurka sambabada wadnaha ee cusub ee adduunka ayaa kor u dhaaftay 200 milyan, taas oo u dhiganta 1 ka mid ah 39 qof ee adduunka ah oo uu ku dhacay cudur cusub. oof wareenka wadnaha, iyo saamiga dhabta ah ayaa laga yaabaa inuu sarreeyo. Noocyada noolaha sida Delta, oo ah kuwa aad u faafa, ayaa si aad ah u socda, waxayna ku faafeen 135 waddan iyo gobollo ah muddo gaaban.
Marka la eego sida caadiga ah ee ka hortagga iyo xakameynta faafitaanka, faafinta siyaasadaha dadweynaha ee khuseeya waxay kordhisay baahida loo qabo galoofyada la tuuri karo. Komishanka Caafimaadka Qaranka iyo Qorshaynta Qoyska ee Shiinaha ayaa soo saaray "Hagaaraha Farsamada ee Ka-hortagga iyo Xakamaynta Caabuqa Coronavirus Novel ee Hay'adaha Caafimaadka (Daabacaadda Koowaad)" bishii Janaayo ee sanadkan, oo looga baahan yahay shaqaalaha caafimaadka inay xirtaan galoofyada la tuuri karo marka loo baahdo; Wasaaradda Ganacsiga ayaa soo saartay ka-hortagga iyo xakamaynta faafitaanka Tilmaan-farsadeed: Dadka ka shaqeeya xarumaha dukaamaysiga, dukaamada waaweyn ama suuqyada wax-soo-saarka beeraha waa inay xidhaan maaskaro iyo gacan-gashiyo marka ay alaabta u gudbinayaan macaamiisha...
Xogta laxiriirta waxay muujineysaa in si tartiib tartiib ah ay isu beddeshay wacyiga dadweynaha ee ilaalinta caafimaadka iyo caadooyinka nolosha, baahida loo qabo galoofyada maalinlaha ah ee la tuuri karo ayaa sidoo kale sii kordhaya. Baahida suuqa galoofyada adduunka ee la tuuri karo ayaa la filayaa inuu gaaro 1,285.1 bilyan marka la gaaro 2025, iyadoo kobaca sanadlaha ah ee isku dhafka ah uu yahay 15.9% laga bilaabo 2019 ilaa 2025, taasoo aad uga badan heerka kobaca isku dhafka ah ee 8.2% laga bilaabo 2015 ilaa 2019 sannadihii ka hor faafitaanka.
Heerarka nololeed ee sarreeya iyo heerka dakhliga ee dadweynaha ku nool waddamada horumaray, iyo xeerarka adag ee caafimaadka dadweynaha, 2018, oo aan tusaale u soo qaadannay Maraykanka, qof kasta isticmaalka galoofyada la tuuri karo ee waddanku wuxuu gaadhay 250 xabo/qof/ sanad; Waqtigaas, Shiinaha hal mar Isticmaalka galoofyada galmada ee qof kasta waa 6 xabbadood / qof / sannadkii. Sannadka 2020, saamaynta cudurka faafa awgeed, isticmaalka galoofyada la tuuri karo ee adduunka ayaa si aad ah u kordhi doona. Iyadoo la tixraacayo xogta cilmi-baarista warshadaha ee mustaqbalka, isticmaalka qof kasta ee galoofyada la tuuri karo ee Maraykanka waa 300 lammaane / qof / sannadkii, iyo isticmaalka qof kasta ee galoofyada la tuuri karo ee Shiinaha waa 9 lammaane / qof. /Sanadka
Dadka u dhuun daloola wershadaha ayaa tilmaamay in kobaca dhaqaalaha, kobaca dadweynaha iyo wacyiga sii kordhaya ee ilaalinta caafimaadka, wadamada soo koraya la filayo in ay arkaan kobac horumar leh oo isticmaalka galoofisyada muddada gaaban iyo dhexe. Si kale haddii loo dhigo, baahida caalamiga ah ee galoofyada la tuuri karo ayaa ka fog inay gaaraan saqafka sare, welina waxaa jira boos weyn oo koritaanka mustaqbalka.
Awoodda wax soo saarka gacan-gashi
Ka soo wareejinta Koonfur-bari Aasiya ilaa Shiinaha
Weriyaha ayaa isku dayay xogta dadweynaha wuxuuna ogaaday in marka loo eego qaybinta warshadaha, alaab-qeybiyeyaasha adduunka ee aadka u wanaagsan ay ku badan yihiin Malaysia iyo Shiinaha, sida Top Gloves, Intech Medical, He Tejia, High Yield Qipin, Blue Sail Medical, iwm. .
Waagii hore, soosaarayaasha ugu muhiimsan ee galoofyada cinjirka ah iyo galoofyada nitrile waxay ku urursanayeen Malaysia, alaab-qeybiyeyaasha PVC (polyvinyl chloride) galoofyada asal ahaan waxay ahaayeen Shiinaha. Sanadihii la soo dhaafay, sida silsiladda warshadaha batroolka ee dalkaygu ay qaan gaadhay, awoodda wax soo saarka ee galoofyada nitrile waxay muujisay isbeddel tartiib ah oo ka yimid Koonfur Bari Aasiya ilaa Shiinaha. Sida laga soo xigtay khubarada warshadaha, dhismaha khadka wax soo saarka ee gacan-gashiga ee horumarsan ee la tuuri karo waa adag tahay oo wuxuu leeyahay wareeg dheer. Guud ahaan, muddada dhismaha ee galoofyada PVC ee la tuuri karo waxay qaadataa qiyaastii 9 bilood. Khadka wax-soo-saarka nitrile-ka ee la tuuri karo oo leh marin-farsamo sare, maalgashiga hal xariiq wax-soo-saar wuxuu dhaafi doonaa 20 milyan yuan, iyo wareegga-soo-saarka wareegga koowaad waa ilaa 12 illaa 18 bilood. Saldhig-wax-soo-saarka baaxadda weyni waa inuu maalgeliyaa ugu yaraan 10 goobood oo wax-soo-saar ah, mid walbana leh 8-10 khadadka wax-soo-saarka. Waxay qaadan doontaa in ka badan 2 ilaa 3 sano in dhammaan saldhigga la dhammeeyo oo la hawlgeliyo. Iyadoo la tixgelinayo qiimaha khadka wax soo saarka ee PVC, wadarta maalgashiga waxay u baahan tahay ugu yaraan 1.7 bilyan ilaa 2.1 bilyan yuan. RMB
Marka la eego saameynta faafitaanka, alaab-qeybiyeyaasha Koonfur-bari Aasiya aad ayey ugu adag tahay inay xaqiijiyaan wax soo saarka joogtada ah oo xasilloon ee galoofyada la tuuri karo ee khadadka wax-soo-saarka. Hoos-u-dhaca awoodda wax-soo-saarka muddada-gaaban iyo dhexe waa lama huraan, iyo farqiga baahida suuqa caalamiga ah ayaa sii kordhaya. Sidaa darteed, dadka u dhuun daloola warshaduhu waxay aaminsan yihiin in galoofyada nitrile-ka ee Shiinaha ee la tuuri karo ay buuxin doonaan farqiga sahayda, faa'iidada alaab-qeybiyeyaasha nitrile-ka gudaha ayaa la taageeri doonaa muddo wakhti ah.
Marka la eego dhinaca soosaarayaasha galoofyada guriga ee la tuuri karo, xawliga kor u qaadista awooda labadii sano ee la soo dhaafay ayaa sii waday inay kor u kacdo. Marka la eego xaaladda cusboonaysiinta ee hadda jirta, oo ka mid ah shirkadaha hormuudka ah ee la tuuri karo galoofyada gudaha ee shirkadaha, Intech Medical waa soo-saaraha maalgelin weyn ku leh warshadaha caalamiga ah. Shirkaddu waxay ku leedahay saddex saldhig oo wax-soo-saarka galoofyada ah oo ku yaal Zibo, Qingzhou iyo Huaibei dalka oo dhan. Maalmo ka hor, iyadoo laga jawaabayo su'aalaha ku saabsan in awoodda wax-soo-saarka Intech Healthcare ay si dhaqso ah u kordheyso, Liu Fangyi, oo ah guddoomiyaha shirkadda, ayaa mar yiri "Awoodda wax-soo-saarka tayada sare leh ma noqon doonto mid xad-dhaaf ah." Marka loo eego aragtida hadda jirta, iyada oo la bilaabayo xasilloonida awoodda wax soo saarka, Intech Medical waxay leedahay fursad ay ku qabsato saamiga suuqa mustaqbalka. Warbixinta Cilmi-baarista Securities ee Koonfur-galbeed waxay muujineysaa in rubuci labaad ee 2022, awoodda wax-soo-saarka sannadlaha ah ee Intech Medical galoofyada la tuuri karo waxay gaari doontaa 120 bilyan, taas oo qiyaastii 2.3 jeer ka badan awoodda wax-soo-saarka sannadlaha ah ee hadda. "Lacagta dhabta ah" ee la soo saaro inta lagu jiro cudurka faafa waxay noqotay saldhigga maaliyadeed ee shirkadda si loo hubiyo in si habsami leh loo hirgeliyo mashruuca tayaynta awoodda.
Waxaa xusid mudan in, marka loo eego warbixinta sanadlaha ah ee Ingram Medicalâ€TM2020, qulqulka saafiga ah ee lacagta caddaanka ah ee shirkadu ay ka heshay hawlqabadyadu waxay ahayd 8.590 bilyan yuan, halka lacagaha lacagtuna ay gaadhay 5.009 bilyan yuan; Warbixinta saddex biloodlaha ah ee sanadkan, dakhliga saafiga ah ee shirkadda ee hawlaha hawlgalka wuxuu ahaa 3.075 bilyan yuan. Yuan, korodhka sannad kasta ee 10 jeer, inta lagu guda jiro xilliga warbixinta, lacagaha lacagtu waxay gaadhay ilaa 7.086 bilyan yuan, korodhka 8.6 ee isla muddadaas sannadkii hore.
Eeg awoodda xakamaynta kharashka
Awoodda xakamaynta kharashku waa mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee go'aaminaya faa'iidada mustaqbalka ee shirkadaha galoofyada ee la tuuri karo. Khubarada wershadaha ayaa tilmaamay in marka la isku daro qiimaha ay ka kooban tahay warshadaha galoofyada ee la tuuri karo, labada shay ee ugu horreeya ee lagu xisaabtamayo saamiga ugu badan waa qiimaha alaabta ceeriin iyo qiimaha tamarta.
Xogta dadwaynaha ayaa muujinaysa in shirkadaha hadda maalgashanaya warshadaha galoofyada ee warshadaha, kaliya Ingram Medical iyo Blue Sail Medical ayaa leh qorshe maalgashi wadajir ah. Maaddaama marinka maalgashiga aadka u adag iyo dib u eegista tamarta ee dhirta tamarta kulaylka awgeed, 2020, Intech Medical waxay ku dhawaaqday inay maalgashi ku samayn doonto isku darka mashaariicda kuleylka iyo tamarta ee Huaining iyo Linxiang. Awoodda wax-soo-saarka sannadlaha ah ee la qorsheeyay ee 80 bilyan nitrile butyronitrile waxay noqon doontaa xakamaynta kharashka warshadaha. Awoodda ugu awoodda badan. Ingram Medical ayaa mar sheegay goobta is dhexgalka maalgashadayaasha in marka la eego xakamaynta qiimaha, Ingram Medical uu gaadhay heerka ugu fiican adduunka ee warshadaha.
Intaa waxaa dheer, Ingram Medical ayaa soo saartay ogeysiis bishii Abriil ee sanadkan in shirkadu ay heshay dakhliga hawlgalka ee 6.734 bilyan yuan rubuci hore ee 2021, korodhka 770.86% sannadkiiba, iyo faa'iido saafi ah oo ah 3.736 bilyan yuan, kaas oo ayaa ka fiican labada gacmo-gashi ee ugu sarreeya Malaysia iyo Hetejia. Kordhi saamiga suuqa caalamiga ah.
Waxaa la fahamsan yahay in Intco Medical ay u adeegto macaamiisha 10,000 in ka badan 120 waddan iyo gobollada adduunka; Magacyada shirkadda "Intco" iyo "Basic" waxay si guul leh uga aasaaseen shan suuq oo qaaradaha ah. Waqtigan xaadirka ah, awoodda wax-soo-saarka sannadlaha ah ee galoofyada ilaalinta ee la isku daray ee la tuuri karo waxay ku dhowdahay 10% isticmaalka sannadlaha ah ee caalamiga ah. Iyada oo taas laga duulayo, waxa la bilaabay mashaariicdii ay shirkaddu ka fulisay dhinaca tayaynta wax-soo-saarka iyo xakamaynta kharashka.
Dadka u dhuun daloola warshaduhu waxay aaminsan yihiin in marka la barbar dhigo Malaysia, warshadaha gacan-gashi ee Shiinaha ee la tuuri karo ay leeyihiin faa'iidooyin nidaamsan xagga alaabta ceeriin, tamarta, dhulka iyo dhinacyo kale. Mustaqbalka, isbeddelka wareejinta warshadaha ee Shiinaha waa mid cad. Soosaarayaasha gudaha ayaa wajahaya fursado casriyeyn oo waaweyn, muuqaalka tartanka sidoo kale wuu isbedeli doonaa. Isla mar ahaantaana, dadka u dhuun daloola warshadaha ayaa sidoo kale tilmaamay in shanta sano ee soo socota ay noqon doonaan xilli xasaasi ah awoodda wax-soo-saarka gacmo-gashi ee Shiinaha si loo dardargeliyo dhoofinta badda iyo buuxinta baahida gudaha. Ka dib qarxinta joogtada ah ee waxqabadka shirkadaha hormuudka ah ee warshadaha, warshadaha galoofyada gudaha ee la tuuri karo ayaa la filayaa inay beddelaan gears oo ay galaan "qallooca kobaca" muddada dheer iyo xasilloon.
Hore:Farqiga u dhexeeya goonnada go'doominta ee la tuuri karo, gooyada ilaalinta iyo dharka qalliinka